Fitsangatsanganana an-tsehatra - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Tongasoa eto Histe
Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia kojakoja fampangatsiahana mangatsiaka feno, izay namboarina avy amin'ny silika vita amin'ny silika mahazaka afo nafarana ary novolavolain'ny manam-pahaizana manokana momba ny fingotra, mpahay simia ary manam-pahaizana amin'ny alàlan'ny fikarohana sy fanandramana fito taona. Ireo vokatra ireo, izay namorona firaketana tao amin'ny prefab Ny saha misy fantsom-pifandraisana mangatsiaka mangatsiaka any Shina dia eo am-pelatanan'ny zon'ny fanjakana tokana aorian'ny fizahan-toetra nataon'ny Wuhan High Voltage Research Institute State Grid Corporation of China, Nation Center for Quality Supervision and Test of Insulator and Surge Arrester, araka ny fenitra nasionaly GB11033 , GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-199, ny vokatra dia noheverina ho mahafeno fepetra amin'ny fenitra nasionaly amin'ny lafiny rehetra.
Anisan'ireo mpiasa 256 taona rehetra, olona manana mari-pahaizana doctorat na bakalorea ho an'ny 17.
Ny orinasanay dia teo amin'ny toerana voalohany foana tao an-trano niaraka tamin'ny fitantanana maoderina, nitombo ny hery ara-teknika, ny rafitra fanaraha-maso kalitao tsara, ny taratasy fanamarinana kalitao sy ny mari-pahaizana feno, ny teknika fanandramana mandroso ary ny serivisy aorian'ny asa fanompoana.
Nandritra ny 10 taona dia nanolotra fantsom-pifandraisana an-tapitrisany sy vokatra tambajotra mpanohana hafa izahay ho an'ny fananganana sy ny fanavaozana ny tamba-jotra herinaratra nasionaly. Tamin'ny taona 2004 dia nanatanteraka 500kV sy insulator fitambaran-jiro ambany kokoa ny orinasa, 35kV ary arresteran'ny zinc oxide ambany, nanasaraka switch, fuse dropout, fantsom-by busbar elektrika, booster booster, fatran'ny fatran'ny herinaratra (boaty), fantson'ny rindrina, sns. Izany dia nahitana fiakarana manan-tantara avy amin'ny vokatra herinaratra ambany sy antonony mankany amin'ny iray avo sy mahery indrindra, manomboka amin'ny tokana ka hatramin'ny Fandraisana anjara lehibe amin'ny famatsiana herinaratra elektrika azo antoka ho an'ny indostrian'ny herinaratra, lalamby, indostrian'ny solika, fitrandrahana arintany ary orinasa goavambe hafa. Hikiry hatrany amin'ny paikadinay izahay izay manara-maso ny hoavin'ny orinasa ary manome tolotra tsara kokoa.